China Niu Bnag တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Burdock အမြစ်လှီး Arctium Lappa အမြစ် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |အကောင်းဆုံး
Niu Bnag Chinese Herbal Medicine Burdock root လှီး Arctium Lappa Root
တရုတ်အမည် niu bang gen
အင်္ဂလိပ်အမည်- Burdock အမြစ်
လက်တင်အမည်- Arctium lappa L.
အဓိကလုပ်ဆောင်မှု- လေအပူကို ခွဲထုတ်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ပိုးသတ်ခြင်း။
Burdock root, တရုတ်တိုင်းရင်းဆေး၏အမည်။၎င်းသည် Arctium lappa L. Burdock ၏အမြစ်ဖြစ်ပြီး အရှေ့မြောက်၊ အနောက်မြောက်၊ တောင်အလယ်ပိုင်း၊ အနောက်တောင်နှင့် Hebei၊ Shanxi၊ Shandong၊ Jiangsu၊ Anhui၊ Zhejiang၊ Jiangxi၊ Guangxi နှင့် အခြားနေရာများတွင် ဖြန့်ဝေထားသည်။လေအပူကို ခွဲထုတ်ပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းကို ပိုးသတ်ပေးသည့် အာနိသင်ရှိသည်။လေပူ၊ အအေးမိ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ချောင်းဆိုး၊ အပူအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ မျက်နှာ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း gingiva၊ rheumatic arthralgia, scrofula, carbuncle, Vickers, hemorrhoids နှင့် anal prolapse အတွက် အသုံးများသည်။စိုက်ပျိုးလေ့ရှိသည်။တောရိုင်းများတွင် အများစုမှာ လမ်းဘေး၊ မြောင်းများ၊ မြေရိုင်းများ၊ တောင်စောင်းများ၊ နေသာသော မြက်ခင်းများ၊ တောအုပ်များနှင့် ရွာများတွင် နေထိုင်ကြသည်။
အရှေ့မြောက်၊ အနောက်မြောက်၊ အလယ်ပိုင်း၊ တောင်၊ အနောက်တောင်နှင့် Hebei၊ Shanxi၊ Shandong၊ Jiangsu၊ Anhui၊ Zhejiang၊ Jiangxi၊ Guangxi နှင့် အခြားနေရာများတွင် ဖြန့်ဖြူးထားသည်။ဗိုင်းလိပ်တံပုံသဏ္ဍာန်၊ အသားထူပြီး မတ်မတ်။အရေပြားသည် အညိုရင့်ရောင်ဖြစ်ပြီး အတွင်းဘက်တွင် အဝါရောင် အဖြူဖြစ်သည်။အရသာက ခါးပြီး စေးကပ်ပါတယ်။
လေအပူကို လွင့်စင်စေပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို ပိုးသတ်ပေးသည်။
အအေးမိခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ပူအဆိပ်သင့်သောမျက်နှာပြင်များ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ လည်ချောင်းများ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်း၊ ဒူလာနှင့် အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဖုအကြိတ်များ စုပုံခြင်း၊ carbuncle၊ မွေးကျွတ်နာများနှင့် အနာများ၊ လိပ်ခေါင်းများကို အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဖယ်ရှားခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်။
1. အပူမပြေတဲ့အခါ၊ ရေငတ်တာ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေ အားနည်းလာတဲ့အခါ မစားနိုင်တော့ဘူး- Burdock Root mash ဖျော်ရည်၊ ခွက်သေးတစ်ခွက် (《 Sheng Hui Fang )၊
2. အပူကုသမှု၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှု - Burdock Root mash ဖျော်ရည်တစ်လီတာ။အစာစားပြီးပါက သုံးပိုင်းခွဲပါ (《Food Doctor mood)၊
၃။ ဦးခေါင်းနှင့် မျက်နှာ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အပူအဆိပ်သင့် လေတိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခြေလက်များ နီရဲရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကို ကုသခြင်း - အာထရီယမ် lappa အမြစ်ကို ရေဆေးပြီး ကြိတ်ချေပြီး ပျစ်ပျစ်ပျစ်ဖြင့် ကြိတ်ချေပြီး စက္ကူပေါ်တွင် ဖြန့်ကပ်ပါ။ အဖုအကျိတ်နေရာတွင် ဝိုင်ပူပူဖြင့် ညှိထားပါ၊ တစ်ကြိမ်သောက်ပါက ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုကို သက်သာစေမည် (《Doumen Square)
4. အသံအိုးအတွင်း အပူရောင်ရမ်းခြင်းကို ကုသရန်- ကြွက်သည် အမြစ်တွယ်ခြင်း (ဖြတ်တောက်ခြင်း) တစ်လီတာဖြစ်သည်။ရေငါးလီတာယူ၊ သုံးလီတာပြုတ်ပြီး မတူညီတဲ့အပူချိန်မှာ သုံးလေးလုံးသောက်ပါ။ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ခေါက်ဆွဲတွေကို ရှောင်ပါ (Yannian ရဲ့ လျှို့ဝှက်မှတ်တမ်း)
5. ကလေး pharyngeal ရောင်ရမ်းခြင်းကို ကုသခြင်း- Burdock Root tamping ဖျော်ရည်၊ fine pharynx (《 Puji Fang )
ခံတွင်းအုပ်ချုပ်ရေး: decoction, 6-15g;သို့မဟုတ် mash ဖျော်ရည်;သို့မဟုတ်သုတေသန၏အဆုံး;သို့မဟုတ် စပျစ်ရည်စိမ်ပါ။ပြင်ပအသုံးပြုမှု- သင့်လျော်သောပမာဏ၊ tamping;သို့မဟုတ်ပြုတ်မုန့်;သို့မဟုတ် ကြော်ပြီး ရေဆေးပါ။
အောက်တိုဘာလတွင် ၂ နှစ်ကျော်ကြာ အမြစ်များကို စုဆောင်း၊ ဆေးကြောပြီး အခြောက်ခံခဲ့သည်။
ယခင်- Mu Dan Hua Bao လက်ဖက်ရည်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် အော်ဂဲနစ်သဘာဝအခြောက်ခံပန်းပွင့် Peony Bud
နောက်တစ်ခု: Wu Wang Wo လက်ကားထုတ်လုပ်သူ အခြောက်လှန်းထားသော ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ပန်းလက်ဖက်ရည် Myosotis Sylvatica Forget-Me-Not ပန်းပွင့်
Chou wu Tong ထုတ်လုပ်သည့် တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ...
Duan shu hua ထုတ်လုပ်သူ အရည်အသွေးမြင့် အခြောက်လှန်း Ti...
Mei Gui Hua လက်ကား အရည်အသွေးမြင့် အော်ဂဲနစ် အခြောက်...